Ụbọchị Nzuzo data: Ihe mere ị ga-eji na-elekọta na ihe ị ga-eme - ụlọ akwụkwọ ITS Tech
N'ebe ahụ mgbe United States Congress kwadoro S. Res. 337, mkpebi siri ike na-ekwusi ike na-egosi nkwado maka ọrụ "Ụbọchị Nzuzo National" ka a hụrụ na January 28, ọ bụghị oge dị ukwuu iji wepụta okwu ahụ, n'agbanyeghị na eziokwu ahụ dị gburugburu maka obere oge.
Otú ọ dị, nke ahụ bụ ụbọchị nke mbụ m ghọtara ụbọchị Ụbọchị Nzuzo, na n'ime afọ ebe ọ bụ na ngalaba ụgwọ ahụ, abụwo m onye mmeri nke nchekwa nchekwa data yana mgbakwunye Nchedo data na-arụ ọrụ.
Mkpebi nke January 28 adịghị adaba. Na ụbọchị ahụ na 1981, Council of Europe na-eme Nkwekọrịta maka Nchebe nke Onye Ọ bụla na Banyere Ịhazi Nhazi Onwe. N'ụzọ dị mma, ha na-ebelata aha ahụ dị ntakịrị maka oge ahụ ma jiri akara 108 Convention, bụ isi iwu na-egbochi azụmahịa zuru ụwa ọnụ na-elekọta nchebe na Nkwenye data.
Ụbọchị Nzuzo data malitere na United States ihe ọzọ, Canada na Jenụwarị 2008 dị ka mmụba nke ụtọ Day Data Nchedo na Europe. Oge ụwa dum na-enwe ọganihu nchebe na nchedo data kacha mma. Ị mara na United States, Canada na 27 mba Europe, ọrụ nkụzi nke Data Data Day bụ itinye uche na iwetara nsogbu n'etiti ndị ahịa na òtù dị mkpa nke ịchekwa nchekwa ha Data na weebụ. Nke a emeela ka ọ dịkwuo mkpa karịa ka onye mmadụ na-ekwurịta okwu ka ọ gbasaa ma ọ bụrụ na ọ dị elu n'ime afọ niile ka enwere nchebe.
Ụbọchị Nzuzo data ga-akụzi na ịmekọrịta ndị otu, ndị ahịa na ndị ezinụlọ na mmụta na omume kachasị mma iji chebe onwe ha pụọ ​​na mmemme, nje na malware nwere ike itinye data ha dịka ihe ize ndụ. Ụbọchị Nzuzo data jikọtara ndị mmadụ dị iche iche nakwa ndị ọchịchị, ndị nkụzi, ndị gụnyere ndị ọrụ ebere na ndị ọsụ ụzọ na-agafe n'akụkụ ụlọ ọrụ.
Ya mere, olee ihe ị ga-enwe ike ime banyere Nche data? Na ohere na nchekwa nke data gị na nchebe gbasara gị, Ụbọchị Nzuzo Data bụ oge pụrụ iche iji malite n'ụzọ dị irè iji hụ data gị. Ebumnuche, Sony na Yahoo niile weere n'ụzọ kasị sie ike. Ọ bụ uru kasịnụ nke azụmahịa ọ bụla iji mee nnukwu ọrụ nlekọta data ma ọ bụ ha ga - abụ akụkọ nduzi na - esonụ na CNN ma ọ bụ ihe omume dị mkpa na New York Times. N'agbanyeghi ma ọ bụ akụ gị, ọkachamara, ụlọ ahịa ọgwụ maọbụ na-arụ ọrụ, na-agba ha ume iji nweta data gị zuru ezu. O doro anya na ị gaghị anabata data gị. Bụrụ onye na-akwado nchekwa data.
National Cyber ​​Security Alliance na-eme atụmatụ ọganihu nke mmemme Ụbọchị Nzuzo Data. Nke a bụ akụkụ nke ihe ndị ha na-agba anyị ume ime iji kwalite Day Ụbọchị Nzuzo:
Gwa ya. Iji hụ data gị, ịkwesighi ịtụ egwu ịkparịta ụka n'Ịntanet. Tweet nchedo ndụmọdụ. Zipu ozi na akaụntụ Facebook na LinkedIn. Ị nwere ike iji ụbọchị data Nzuzo data nchịkwa #PrivacyAware ma weghaara @DataPrivacyDay iji nọgide na-eme ihe na akụkụ kachasị nke Atụmatụ Nzuzo Data kachasị ọhụrụ na-enye ndị mmekọ na ndị na-efe gị.
Mee ya onyeisi. Ị nwere ike ịkwado gị mkpakọrịta na-egosipụta nkwado ya na Ụbọchị Nzuzo Data site na ịtụgharị n'ime Onye Nchịkwa Ụbọchị Nzuzo Data. N'afọ gara aga, karịa ndị òtù 450 kpọọrọ dị ka Nchịkọta Ụbọchị Nzuzo Data. Ọ brisk ma dị mfe isonye.
Mee ya otu. Nchedo data na-amalite n'ụlọ, ya mere mee ka ndị enyi gị na ndị ezinụlọ mata ihe ize ndụ na data nke ha, karịsịa ụmụaka na ndị na-eto eto bụ ndị nwere ike gbasaa site na netwọk mgbasa ozi netwọk weebụ. Chebe data gị na ohere ị nwere ndekọ aha gị na PC gị, mbadamba ma ọ bụ TV ndị a na-ejikọta ya na mgbasa ozi mgbasa ozi dị ka Netflix, Hulu, Amazon Prime na iTunes.